Manaova ny sahona
Mendrika Fanazaran-tena ho an'ny vehivavy
Ankehitriny, misy fanazaran-tena goavana mikendry ny hamolavola vondrona isan-karazany. Ny saintsika dia misintona ny sahona fanatanjahantena ho an'ny rambony, ny tongony ary ny gazety. Ny karazana varotra isan-karazany ao anatin'io fampiharana io dia ahafahanao mamolavola vondrona mozika maro atsy ho atsy, ny tena zava-dehibe dia ny mahafantatra ny teknikan'ny famonoana amin'ny fanaovana tsinontsinona ny nuances rehetra.
Ny sahona fanatanjahan-tena ho an'ny fitsinjarana
Ny zazavavy te te ho lasa tompon'ireo tongotra mamo, dia tokony handinika tsara ny fampiharana. Ny "Frog" dia hanatsara ny fihazonana azy , hanamafy ny haino aman-jery sy ny tongony. Ankoatr'izany dia mihatra amin'ny fahasalamana ny fihanaky ny aretina, mampihena ny mety ho aretina amin'ny aretim-piterahana.
Ahoana ny fomba hanaovana ny fanatanjahantena sahona amin'ny fanitarana ny tongotra:
Miomàna amin'ny tongotra efatra ary atomboy ny lohalika manasaraka mandra-pahavitan'ny tsipika mahitsy eo amin'ny feny sy ny shin. Ny taolam-paty dia tokony ho loha-laharana amin'ny tany.
Hamindra tsikelikely ny valin-doha ary afantaho ny vodiondry eo amin'ny tany. Any aoriana dia tokony ho ny fivilian-tsokajiny indrindra.
Amboary ny toerana mandritra ny iray minitra ary avereno any amin'ny PI, ary avereno imbetsaka ilay fampiharana.
Mba hampatanjaka ny fitohanana dia afaka mampifandray ireo solon'ny zanapeo. Amin'ny voalohany dia sarotra ny hitazona azy ireo eo akaikin'ny andaniny, ka azonao atao ny mangataka ilay mpanampy mba hihazona ny tongotra.
Manao sahona ho an'ny gazety
Ity fampiharana ity dia mahomby ary miaraka amin'ny fanampiany mandritra ny fotoana fohy dia azonao atao ny miala amin'ny lolom-po mahatsiravina ao amin'ny kibony, ento ny tonelina ary, raha ilaina, dia hahazoana fanampiana. Ny frogasy dia mampiasa ny hozatry ny kibo avy hatrany, fa ny enta-mavesatra indrindra dia mbola eo amin'ny hozatra mivantana. Ataovy amin'ny fomba telo ny fanaovana fanatanjahantena, manao 20-30 taona miverimberina. Mba hahazoana ny valiny, aorian'ny fivoasana tsirairay dia tokony hodorana ny gazety.
Ahoana no fomba hanaovana fanatanjahantena sahona?
Mipetraha eo amin'ny toerana marindrano, mitsinjara ny tongotrareo. Asandrato ny tongotra eo am-pelatanany, ary avereno any amin'ny sisiny ny tongony, ary ny tongotra dia tokony hifanerasera.
Atsofohy amin'ny tongotrao ny tongotrao, araka izay azo atao, mba hahatonga ny ranjonao ho rhombus. Ny tanana dia nivezivezy teo amin'ny lamosina, ka tsy manelingelina azy ireo.
Tazony any ambany ny ambany. Mitsangàna, manaova tora-po, manainga ny vatana ambony. Sokafy ny toerana.
Miverina tsikelikely mankany amin'ny IP. Ataovy ny isan'ireo famerimberenana.
Raha te hampitombo ny enta-mavesatra ao amin'ny hozatra anatiny sy ivelany ianao, dia mandritra ny fanodinkodinam-bidy, ataovy ny lamosin'ny vatana, avy eo ny làlana iray, ary ny iray hafa.
Fanazaran-tena ho an'ny tongotra
Fampiofanana ho an'ny zazavavy
Ahoana ny fomba fanondranana ny tsipika ambany?
Fanaovan'ny tanana, mba tsy hihantonan'ny hoditra
Fanatanjahantena ho an'ny gazety sy ny andaniny
Fanatanjahantena ho an'ny kibo aorian'ny fiterahana
Ahoana no handoavana ny lanjany eo amin'ny tongotra tsy misy fantsona?
Doors eo afovoan-trano
20 samihafa rock vato tsy hay hadinoina
Duck miaraka amin'ny orine - recipe
Tazo maina manerinerina ao anaty milina legioma
Corset Taist Trainer
Spermogramma - fomba hiomanana?
Famolavolana fasadina amin'ny vato
Tao anaty efitrano tao amin'ny trano iray
Ahoana ny fampiasana bisikileta ho an'ny vehivavy?
Ahoana no hananana hazo sedera avy amin'ny voamaina?
Visa ho any Namibia
Fitsaboana VSD - fanafody
Cheesecakes - Sakafo isan-karazany amin'ny mofo ao an-trano ho an'ny tsiro tsirairay!
Hazo fanoratana hazo